सहकारीबाट किर्ते गरेर दुई करोड झिकेको खुलासा पिडित कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा «
सहकारीबाट किर्ते गरेर दुई करोड झिकेको खुलासा पिडित कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा
प्रकाशित मिति : 16 August, 2019 11:34 am
काठमाडौंकै एक सहकारीले किर्ते कागजातका आधारमा दुई करोड रुपैयाँ ऋण दिएको पाइएको छ । ललितपुरको सुनाकोठीमा झण्डै डेढ रोपनी जग्गा एकै परिवारका चार जनाको नाममा भए पनि त्यसमध्ये एकजनालाई जानकारीसमेत नदिई किर्ते कागजातका आधारमा ऋण दिएको पाइएको हो ।
मनिकला लामिछाने (गुरुङ) हरिकाजी गुरुङ, चण्डी गुरुङ र विजया गुरुङ सो जग्गाका धनी थिए । लतिलपुर सुुनाकोठीमा रहेको कित्ता नम्बर ६९४ को ३ आना र कित्ता नम्बर ६९२ को एक रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा उनीहरुले ०६४ भदौ ६ गते संयुक्त नाममा खरिद गरेका थिए ।
सो जग्गामा संयुक्त भोगचलन गर्नेगरी साढे दुईतले पक्की घर पनि बनाएका थिए । चार जनामध्ये हरिकाजीको ०७६ वैशाखामा निधन भइसकेको छ ।
उनको हकहिस्सा कसैको नाममा जारी भएको छैन । संयुक्त जग्गा धनीमध्येकै विजया र चण्डी अविवाहित हुन् । संयुक्त जग्गा धनीमध्ये दुई जनाको खोजिनीति नै नगरी सहकारीले दुई करोड ऋण प्रदान गरेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड नयाँ बानेश्वर शाखा कार्यालय र रिलायवल सहकारी संस्था लिमिटेडले सो जग्गा राखेर ऋण दिएका हुन् । ललितपुरमा रहेको जग्गाको दृष्टिबन्धक ०७६ वैशाख १७ गते मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा गरिएको थियो ।
सो दृष्टिबन्धकमा जग्गा धनीमध्येका विजया गुरुङ, चण्डी गुरुङ र मनिकला गुरुङको सहिछाप छ । जसमध्ये मनिकलाको सहिछाप किर्ते गरेको पाइएको छ ।
आफ्नै भाउजु पर्ने मनिकलाको किर्ते गर्ने विजया चण्डीको नियत शंकास्पद देखिएको मनिकलाका आफन्त बताउँछन् । जग्गा धनी नै उपस्थित नभई तथा किर्ते कागजातका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंक र रिलायवल सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋण दिनु पनि आशंकको रुपमा हेर्छन् ती परिवार ।
कसरी दिइयो ऋण ?
आफ्नो अनुपस्थितिमा सहकारी संस्थाले जग्गाको एक जना हिस्सेदारको अनुमति तथा उपस्थितिबिना कसरी ऋण दियो ? आफू आश्चर्यमा परेको मनिकला बताउँछिन् ।
उनको आरोप छ, ‘‘म समेतको सम्पत्ति धितोमा राख्दा धितो राख्ने एकजना हिस्सेदारको अनुमति तथा उपस्थितिबिना धितो दिन मिल्दैन भन्ने कुराको जानकार हुँदाहुँदै अनुचित लाभ लिने नियतले ऋण दिएको देखिन्छ ।’’ मनिकलाले दृष्टिबन्धक गराउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको माग गरेकी छन् ।
विजयाको किर्ते गरेको स्वीकारोक्ति
किर्ते गरेर दुई करोड ऋण लिएको केही समयपछि मात्रै मनिकलाले थाहा पाइन् । त्यसपछि ०७६ साउन १५ गते विजयाले आफ्नो भाउजू पर्ने मनिकलाको सट्टामा दिदी माया गुरुङलाई खडा गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा दृष्टिबन्धक पास गर्दा झुठो विवरण र व्यक्ति पेस गरेको स्वीकारेकी छन् ।
उनको स्वीकारोक्ती पत्रमा सहकारी बैंकका कुनै पनि प्रबन्धक तथा कर्मचारी र रियावलय बचत तथा ऋण संस्थाका कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी र कर्मचारी, मालपोतका कुनै पनि कर्मचारीको सो किर्तेमा संलग्नता नरहेको भन्दै सो जिम्मेवारी आफैँले लिएकी छन् ।
०७६ साउन १५ गते सहकारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा उपस्थित भई उनले सो स्वीकारोक्ती कसैको दबाबमा नभइ आफूले राजीखुसीले गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रहरीले लिएन पीडितको उजुरी
पीडित मनिकला ८३ वर्षकी छन् । उनको तर्फबाट छोरी सुनिता र कान्छी छोरीले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी गर्न खोजे पनि प्रहरीले सुनवाई गरेन । उनीहरु महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुमा जाहेरी दर्खास्त लिएर पुगे ।
दर्ता नभएको जाहेरीमा विजया, चण्डी, माया र रिलायवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लमाथि कारबाहीको माग गरिएको थियो ।
मल्ल पूर्वसांसद समेत हुन् । आफ्नो उजुरी दर्ता नहुनुमा ओमदेवी मल्लका श्रीमान् अपराध महाशाखामै कार्यरत एसपी केदार ढकाल रहेको मनकलाकी छोरीको आरोप छ । पीडितहरुले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, परिसर काठमाडौं, मालपोत र परिसर ललितपुरमा उजुरी गर्न खोज्दा ढकालकै दबाबका कारण रोकिएको उनको आरोप छ ।
म अध्यक्ष हो तर कार्यकारी होइनः मल्ल
यसबारे हामीले रिलायवल सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग कुरा गर्दा मल्लले आफू कार्यकारी नभएको र संस्थाको बारेमा सीईओलाई जानकारी हुने बताइन् ।
बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन, ‘‘रिलायवलले लोन दिएको हैन । राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा राखेको हो । त्यहाँको सीईओलाई सोध्नुस् । उहाँहरु आउनुभयो । आएपछि जसरी अन्य बैंकले ऋण दिन्छन् त्यसरी नै हामी सदस्यलाई दिन्छौं । त्यो फाइल राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा जान्छ । सबै कुरा मिलेर लोन दिइएको हो । नागरिकता पनि सक्कलै थियो । यो त चार भागको कुरा हो ।”
पछि अर्कै व्यक्तिलाई खडा गरेर ऋण लगेको कुरा थाहा पाएपछि आफूहरु छाँगाबाट खसेजस्तै भएको मल्ल बताउँछिन् ।
नागरिकता, तस्बिर हेर्दा पनि उस्तै लाग्ने व्यक्ति देखिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि आफूहरु प्रहरीमा गएपछि विजयाले २ करोड चुक्ता गरेको बताइन् । ऋणीले ऋण तिरेपछि अन्य कुराको आफूहरुलाई चासो नभएको उनले बताइन् । विजयाले गल्ती स्वीकार गरेको मल्लले बताइन् ।
मैले दबाब दिएको छैन, आरोप निराधार होः एसपी ढकाल
पीडित परिवारले अपराध महाशाखामा कार्यरत एसपी केदार ढकालका कारण मुद्दा दर्ता नभएको आरोप लगाएका छन् । तर ढकाल त्यस्तो नभएको बताउँछन् ।
“उहाँहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्यो भने जुन केस तपाईँहरुले बुझिरहनु भएको छ त्यो रिलायवल भन्दा पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत लिएको हो । पछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले जो मान्छेले ऋण लगेको थियो, त्यो लोनमध्येको तीन भागमध्येको एक भाग उहाँको अंश हो । त्यसपछि उहाँले राष्ट्रिय सहकारीबाट ऋण लिएको हो पछि विवाद आएपछि उहाँले ऋण तिरिसक्नुभएको छ । उहाँको अंश फुकुवा पनि भइसकेको छ ।”
ढकालले थपे, “दोस्रो कुरा के हो भन्दा उहाँहरुले जुन मुद्दा ल्याएर आउनुभएको छ त्यो मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा होइन । देवानी प्रकृतिको मुद्दा हो । त्यो उहाँको वकिललाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । उहाँले जालसाजी र किर्ते भन्नुभएको छ । एउटा त मुद्दा नै टुङ्गिसकेको हो । दोस्रो कुरा त्यो मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धान नै नगर्ने विषय हो । यो भन्दा अगाडि रिलायवल र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ठगी गर्यो हामीलाई भनेर लेखेर पठाइसकेको थियो । उहाँले ठगीमा लेख्नुभएको थियो । त्यो आफन्तकै कुरा रहेछ घरकै । त्यसपछि जो ऋणको कुरा छ दुई करोडको त्यो सबै चुक्ता गरिसक्नुभएको छ । त्यसपछि सबै कागज पनि फुकुवा भइसकेको छ । फुकुवा भइसकेकोमा के दर्ता गर्ने ? अर्को कुरा त्यसमा प्रहरीले हेर्ने फौजदारी अभियोगको मुद्दा नै होइन ।”
ढकाल आफूले कसैलाई दबाब नदिएको बताउँछन् ।